Daraasadaynta - Arbetsförmedlingen
Tips inför högskolevalet
Vilken studieform passar dig?
Varning eller förlorad a-kassa
Loogu talogalay adiga oo ku jira barnaamijkayaga sal-dhigida
Baaritaanka – sidaan ayaad u soo bandhigeysaa aqoontaada
العربية (Arabiska) دری (Dari) به پارسی (Persiska) English (Engelska) Русский (Ryska) Af soomaali (Somaliska) Svenska ትግርኛ (Tigrinska)
Tallaabada ugu horreysa ee barnaamijka meeleyntu waa inaan kula kulanno. Waxaad nooga sheegeysaa waaya-aragnimadaada shaqo iyo waxa aad jeceshahay mustaqbalka. Taasina waxay aasaas u tahay qorshahaaga.
Sidaan ayuu baaritaanku u dhacayaa
Marka aan kulanno ayaad nooga sheekeyneysaa waaya-aragnimadaada shaqo, waxbarashadaada iyo waxa aad jeceshahay ama waxa aad mustaqbalka tiigsaneyso.. Waxaa muhiim ah inaan ogaanno haddii ay jiraan wax lala xiriirin karo caawimaadkaaga ama xaaladdaada ijtimaaciga ah oo wax ka beddeli kara fursadda inaad ka qaybqaadato dhaqdhaqaaqyo ama shaqayso. Haddii aad leedahay baahi gaar ah waxaan isku dayeynnaa inaad barnaamijkaas ka dhigno mid kugu habboon. Markaan taas dhammeynno waxaa isla dejineynnaa qorshe kuu gaar ah.
In la turjumo shahaadooyinka iyo caddaymaha aad haysato.
Ma haysataa shahaado ama caddayn waxbarashooyinkii iyo shaqoooyinkiii hore. Kolkaas waxaan kaa caawineynna in la soo turjumo.
Haddii aadan haysan shaqooyin iyo caddaymo
Shahaadooyin iyo caddaymo kama haysato miyaa shaqooyijnkii iyo waxbarashooyinka hore. Waxaan kolkaas kaa caawineynna in la qiimeeyo heerka aqoontaada. Waxaa ka mid ah aqoomo aan caadi ahaan lala xiriirin shaqo: aqoon-luuqadeed, waxa aad waqtiga firaaqada xiiseyso ama xannaanayn qof qaraabo ah.
Ha laguu qiimeeyo waxbarashada aad dibedda kala timid
Ma leedahay waxbarasho jaamacadeed? Waxaa kuu qiimeynaya Guddiga jaamacadaha iyo kulliyadaha. Warqaddaas qiimeynta waxaad isticmaali kartaa marka aad shaqooyin codsaneyso ama aad go’aansato inaad waxbarasho ka sii waddo Iswiidhen.
Qiimeynta waxbarasho dal kale
Sidaan ayaad isugu soo diyaarineysaa
Waxaa wanaagsan inaad isu diyaariso si ay baaritaanka uga soo baxdo natiijada ugu wanaagsan.
Qor liiska aqoomahaaga xirfadeed iyo waxyaalaha aad xiiseyso. Maxaad dooneysaa inaad ku shaqeyso? Ma jirtaa waxbarasho aad si gaar u jeceshahay?
Barta aan internet ku leenahay waxaa jirta aad qiimeyn ku samayn karto aqoomahaaga xirfadeed. Oo afaf badan ku qoran.
Soo qaado wixii shahaadooyin iyo caddaymo ah oo aad ka haysato shaqooyinkaagii iyo waxbarashooyinkaagii hore. Haddii ay warqadahaasi yaalliin dal kale, ku dadaal sidii laguugu soo diri lahaa.
Soo qaado warqadda taariikh-nololeedka (CV) haddaad haysato.
Haddii aad raalli nooga tahay waxaan akhrisan karnaa macluumaadka aad horay ugu qortay barta Jobskills.se.
Macluumaadkaaga ku qor barta Jobskills.se
Adigu qiimeyn ku samee aqoontaada
Qorshaha - qorshaha aad shaqo ku gaareyso
Ujeeddada qorshuhu waa sidii aad ugu heli lahayd shaqo aad masruufkaaga kala soo baxdo. Sidaas awgeed ayaad muddo labo sano ah u haysataa fursad aad uga qaybgasho hawlo lagaaga caawino sidii aad shaqo ugu heli lahayd. Tusaale ahaan waxaa ka mid noqon kara barashada Iswiidhishka, tababar shaqo iyo macluumaadka bulshada.